Izindaba - Ukuqapha nokugcinwa kwemishini yokuhlunga
Ukuqapha nokugcina ukusetshenziswa kwezinto zokuhlunga: Ngaphambi kokusebenzisa isihlungi sensimbi engagqwali, kufanele ubheke ukuthi izesekeli namasongo okuvala akuqediwe nokuthi konakele yini, bese uyakufaka njengoba kudingeka.
Isihlungi esisha kufanele sihlanzwe nge-detergent (sicela ungasebenzisi ukuhlanzwa kwe-asidi). Ngemuva kokugeza, sebenzisa umusi oshisa kakhulu ukushisa inzalo, ukhiphe amagciwane, futhi uhlanze isihlungi ukugwema ukungcoliswa.
Lapho ufaka isihlungi, ungaxhumi itheku kanye nendawo oyisebenzisayo ngokuphambene. Itheku elisohlangothini lwengcwecwe engezansi yesihlungi sepayipi yindawo engena ketshezi, futhi ipayipi elixhunywe kusokhethi yento yokuhlunga yindawo yokuphuma ehlanzekile yetshezi.
Okusha nje ukuthi umenzi akumele adabule okokupakisha kwepulasitiki uma kufakwe kuplastiki esikhwameni sokukhiqiza esihlanzekile. Sebenzisa into yokuhlunga efuna kakhulu futhi udlule ekushiseni inzalo okushisa okuphezulu ngemuva kokufakwa.
Lapho ufaka into yesihlungi ekuvuleni, into yokuhlunga kufanele ime mpo. Ngemuva kokufaka ukuvulwa, ipuleti lengcindezi libopha amaphiko amathiphu, bese uqinisa izikulufu unganyakazi. Ngemuva kokungena kwento yokuhlunga yesixhumi esibonakalayo esingu-226, kufanele ijikelezwe ngama-degree angama-90 futhi ibambane. Lokhu kungukhiye wokufakwa. Uma ungaqapheli, uphawu ngeke lutholakale, futhi ukuvuza kwamanzi kuzoba lula, nezidingo zokusebenzisa ngeke kuhlangatshezwane nazo.
Igeji yengcindezi yesilinda iyinkomba yokucindezela ketshezi. Uma isihlungi sesibili, kuyinto ejwayelekile ukuthi inkomba yegeji yokucindezela isihlungi sokuqala incane kancane. Uma isikhathi sokusebenzisa siside, ingcindezi izokhuphuka nezinga lokugeleza lizokwehla, okusho ukuthi izikhala eziningi zezinto zokuhlunga bezikhona Uma ivinjiwe, gcwalisa noma ufake into entsha yokuhlunga.
Lapho kuhlungwa, ingcindezi esetshenzisiwe imayelana ne-0.1MPa, engahlangabezana nezidingo zomkhiqizo. Ngokwanda kwesikhathi nokuhamba, ama-micropores ento yokuhlunga azovinjwa futhi ingcindezi izokwanda. Ngokuvamile, akufanele yeqe i-0.4MPa. Inani eliphakeme alivunyelwe. Ngaphezulu kwe-0.6MPa. Ngaphandle kwalokho kuzolimaza into yokuhlunga noma kuqhunyiswe. Ukunakekelwa okukhethekile kufanele kuthathwe lapho usebenzisa izihlungi zokunemba.
Lapho umkhiqizo usuphelile, zama ukukhipha i-filtrate ngangokunokwenzeka. Isikhathi sokuphumula asiside. Ngokuvamile, musa ukuvula umshini, ungakhiphi into yokuhlunga, noma ugcine ifiltrate ubusuku bonke. Into yokuhlunga kanye nesihlungi kufanele kuhlanzwe lapho umshini umiswa (indlela yokubuyisela futhi ingasetshenziswa).
Ukusetshenziswa kokuqhathanisa okungakhethwa, naka ukugeleza okudingekayo, ingcindezi, ikhanda lepompo ukufanisa, ukukhethwa ngokuvamile kufaneleka kwamaphampu e-vortex, amaphampu wokumnika, njll., Amaphampu we-centrifugal awasebenzi.
Indlela yesondlo yemishini yokuhlunga
Uma isihlungi singasetshenziswanga isikhathi eside, isihlungi kufanele sihlanzwe, i-elementi yokuhlunga kufanele isuswe, igezwe futhi yomiswe, ivalwe ngesikhwama sepulasitiki ukugwema ukungcoliswa, futhi isihlungi kufanele sisulwe futhi sigcinwe ngaphandle kokulimala.
Into yokuhlunga efakwe esikhundleni kufanele ifakwe kumanzi we-acid-base isikhathi esingaphezu kwamahora angama-24. Ukushisa kwesisombululo se-acid-base ngokuvamile kungama-25 ℃ -50 ℃. Kunconywa ukuthi isilinganiso se-asidi noma i-alkali emanzini singu-10-20%. Isici se-filtrate nesihlungi esinamaprotheni aphezulu kungcono kakhulu ukuthi sifakwe kwisisombululo se-enzyme, nomphumela wokuhlanza muhle. Uma ivuselelwa, kufanele ihlanzwe bese iyabulawa inzalo. Ukuhlanza nokubulala amagciwane kubaluleke kakhulu kuzihlungi zamanzi nokomisa okokuhlunga.
Lapho kuhlanzwa into yokuhlunga, naka isikhathi nethempelesha. Kuyafaneleka ukusebenzisa i-121 ℃ ye-polypropylene kwikhabethe elishisa kakhulu lokushisa amagciwane, futhi usebenzise umusi wokuvala inzalo ngcindezi lomusi we-0.1MPa nemizuzu eyi-130 ℃ / 20. Ifanele i-polysulfone ne-polytetrafluoroethylene. Ukuvala inzalo kungafinyelela ku-142 ℃, ingcindezi engu-0.2MPa, kanti isikhathi esifanele cishe imizuzu engama-30. Uma izinga lokushisa liphakeme kakhulu, isikhathi side kakhulu, nengcindezi iphezulu kakhulu, into yokuhlunga izolimala.